Ireo fanafihana miisa 5 namboarina tamin'ny tranokala ecommerce | Martech Zone
Iray amin'ireo antontan'isa manaitra kokoa momba ny COVID-19 sy ny fanidiana azy dia ny fiakaran'ny vidin'ny e-varotra:
Ny COVID-19 dia nanafaingana ny fitomboan'ny e-varotra, araka ny tatitra an-tsary Adobe nivoaka androany. Mitentina 82.5 miliara dolara ny totalin'ny fandaniana an-tserasera tamin'ny volana Mey, tafakatra 77% isan-taona.
John Koetsier, COVID-19 dia nanatsara ny fitomboan'ny e-varotra '4 hatramin'ny 6 taona'
Tsy misy indostria mbola tsy voakitika… lasa virtoaly ny fihaonambe, nifindra tany amin'ny fitantanana fianarana sy an-tserasera ny fivarotana, nifindra tamin'ny fakana entana sy fivarotana ireo magazay, nanampy trano fisakafoanana ireo trano fisakafoanana, ary na ireo orinasa B2B aza dia nanova ny traikefany mividy hanomezana ireo fitaovana ireo hanompo irery ny fifanakalozana ataon'izy ireo an-tserasera.
Loza fitomboana sy fiarovana amin'ny e-varotra
Tahaka ny fananganana an-tsokosoko faobe, manaraka ny vola ireo olon-dratsy… ary be ny vola amin'ny hosoka amin'ny e-varotra. Araka ny Siansa famantarana, heloka bevava amin'ny cyber no hiteraka mihoatra ny $ 12 miliara ny fatiantoka tamin'ny taona 2020. Rehefa mifindra amin'ny e-varotra ny orinasa vaovao dia ilaina ny mampiditra fiarovana amin'ny tetezamita… alohan'ny handaniany ny orinasany.
Fanafihana e-varotra 5 ambony
Kaonty fandraisana (ATO) - fantatra koa amin'ny hoe hosoka amin'ny fakana kaonty, ATO dia tompon'andraikitra amin'ny 29.8% eo ho eo amin'ny fatiantoka hosoka rehetra. ATO dia mahazo fahazoan-dàlana hidiran'ny mpampiasa haka kaonty an-tserasera. Izany dia ahafahan'izy ireo mahazo angona carte de crédit na manao fividianana tsy nahazo alalana amin'ny fampiasana ny kaontin'ny mpampiasa. Ny hosoka ATO dia mety hampiasa script automatique izay mampiditra marimaritra iraisana na olona manoratra azy ireo ary miditra amin'ny kaonty. Ny fandefasana dia azo alefa any amin'ireo adiresy fandefasana maso izay maka ny vokatra na ampiasaina na amidy amin'ny vola. Ny mpivady solonanarana sy ny teny miafina dia amidy am-be na amidy eny amin'ny tsena Dark Web. Satria olona maro no mampiasa ny fidirana sy ny teny miafina mitovy, ampiasaina ny script mba hizahana ny anaran'ny mpampiasa sy ny teny miafina manerana ny tranonkala hafa.
Chatbot Imposter - Ny bots dia lasa singa iray manakiana ny tranokala e-varotra mba hifandraisan'ny mpampiasa amin'ireo orinasa, hamakivakiana ireo valiny manan-tsaina ary hiresahana mivantana amin'ireo solontena. Noho ny lazany dia lasibatra ihany koa izy ireo ary tompon'andraikitra amin'ny asa 24.1% amin'ny asa fisolokiana rehetra. Ireo mpampiasa dia tsy afaka mamantatra ny maha samy hafa ny chatbot ara-dalàna na ny iray mahatsiravina izay azo sokafana amin'ny pejy. Ny fampiasana dokambarotra na tsindrona script amin'ny Internet dia mety haneho chatbot pop-up sandoka ary avy eo dia haka fampahalalana saropady betsaka araka izay tratry ny mpampiasa.
File fisokafana - Mametraka malware ao amin'ny tranokalan'ny e-varotra ireo olon-dratsy cyber amin'ny alàlan'ny teboka fidirana tsy azo antoka, toy ny plug-in efa antitra na sahan-tsofina. Vantany vao miditra izy ireo dia mahazo ny angon-drakitra rehetra an'ny orinasanao, ao anatin'izany ny mombamomba ny mombamomba ny mpanjifa (PII). Izany data izany dia azo amidy na ampiasaina hahazoana fahazoana miditra amin'ny kaontin'ny mpampiasa. 6.4% amin'ny fanafihana rehetra dia fanafihana fisokafana amin'ny backdoor.
SQL Injection - ny endrika an-tserasera, ny querystrings URL, na ny chatbots aza dia manome teboka fidirana data izay mety tsy hohamafisina ary afaka manome vavahady ho an'ireo mpijirika mba hanontaniany tahiry aoriana. Ireo fangatahana ireo dia azo ampiasaina hanangonana ny mombamomba anao manokana avy amin'ny tahiry izay itazonana ny mombamomba ilay tranonkala. 8.2% amin'ny fanafihana rehetra dia vita amin'ny tsindrona SQL.
Fanoratana an-tsoratra (XSS) - Ny fanafihana XSS dia ahafahan'ny mpanafika manindrona script amin'ny alàlan'ny browser an'ny mpampiasa ao anaty pejy web hitan'ny mpampiasa hafa. Io dia ahafahan'ireo hackers mandingana ny fifehezana fidirana sy miditra amin'ny fampahalalana azo fantarina (PII).
Ity misy infographic tsara avy amin'ny Siansa Signal amin'ny Ny firongatry ny fisolokiana amin'ny varotra e-varotra - ao anatin'izany ny fomba, lamina ary fepetra fiarovana izay tsy maintsy tandreman'ny orinasanao ary ampidirina amina paikady e-varotra rehetra.
Tags: mpisandoka kaontyfandraisana ny kaontyfanafihana fakana kaontyhosoka amin'ny fakana kaontyatoVaravaranascripting amin'ny cross-siteheloka bevava amin'ny cybere-varotrastatistikan'ny fanafihana e-varotrafiarovana amin'ny hosoka amin'ny e-varotrafomba fanaovana hosoka amin'ny e-varotralamina hosoka amin'ny e-varotrahosoka amin'ny ecommercefiarovana ecommercehosoka amin'ny Internetmpivarotra cybersecuritysiansa tokanatsindrona sqlfanafihana tampon'ny firenenafanafihana tranonkala